Tarkaanfii fudhatamu, kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesu ta’uu qaba – Oromedia
Home » Gulaalaa » Tarkaanfii fudhatamu, kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesu ta’uu qaba
By Ibsaa Nagawoo
Ummatni Oromoo fi qabsaawootni bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa diina innikkaa fi kanneen biroo adda baasuun diinota tarsimoo qofa irratti tokkummaan xiyyeeffatuu qaban.
Qabsoon bilisummaa Oromoo bakka duubatti deebbi’uu irra tarkaanfatee booqonaa haarayaa fi bakka humni fedhe of duubbatti deebiisu danda’u irra aaneetti jira.
Haata’u malee, Oromoon amma illee diinna tarsimoo injifatuuf enyuutuu diinna innikkaatti kan jedhuuf deebbii gahaa fi kan yeroon gaafatu tokkummaa fi hojiin agarsiisuu qaba. Diinna innikkaa yokkaan diinota tarsimoo dhiisanii wal dadhabii xixiqaa irratti wal jeequun diinna innikkaaf yeroo kennuunii fi ummata keessa afanfaajii diinni innikkaa barbaadu ofanii ofsiisuun diinna tarsimoo osoo hin beekiin gargaaruu irraa adda nama hin baasu. Waan ta’eef, yeroon keessa jiru kun yeroo tarkaanfii fudhachuuf deemnu, hunda dura itti yaaduun waan hojjannu beekun ta’u qaba. Tarkaanfiin fudhatamu hundis kan diinota tarsimoo QBO miidhuu fi laaleesuuf jiraatu ta’uu qaba.
Diinota tarsimoo caalaa qophoofne yoo hin argamiin diinota keenya irra aanuun hin danda’amu. Diinaa fi fira keenyas sirriitti adda baasnee yoo hin beekne tarkaanfiin fudhannu hundis kan diina tarsimoo hin taane mara diinota tarsimoo akka gargaaran gochuuniis ni mala. Oromoon Oromoof diina tarsimoo ti. Jarreen diinota tarsiimoo QBO ta’an ammoo Oromoo fi Oromoo waliitti diinoomsuun yeroo bittatuu barbaadu. Oromomoo fi saboota biroo diinota tarsimoo waliitti gochuun ofiif yeroo bitachuun qabsoo bilisummaa fi walabummaa Oromoo kophxeesuu barbaadu. Oromoon haaloota kana gadii fageenyaan hubatee toftaa fi tarsimoo tokkummaa isaa jabeesuu hordofu qaba malee xiiyya diinota innikkaa keessatti kufuuf wal qopheesuu hin qabu. Diinnii innikkaa tokko fi tokkoo qofa, Faashiistoota TPLF.
Biyya diinni innikkaa kun nagaa dhorkee ummata Oromoo ajjeessaa fi hidhaa jiru keessatti FXG jabeesuun ala gaafìin osoo nagaan hin jiraane diinna innikkaa kana karaa “hiriira nagaaatiin ” nagaa gaafatan hin jiru. FXG jabeesuun qabsoo bifa hunda gaggeesuun diina tarsimoo kana Oromiyaa irraa kaasuun Oromiyaa walaboomsuu qofatuu nagaa waaraa fiduu danda’a kan jedhu qofarratti xiyyeeffatuu qofatuu Oromoo fi qabsaawoota Oromoo daandii irratti tiksuu fi tokkummaa isaaniitis ittichuu danda’a.
Diinnii Oromoo yeroo irraa yerootti tarsimoo fi toftaa Oromoo fi Oromoo wal afaan buusaa baafachuun isaa beekamaadha. Oromoon Waan diinota tarsimoo irraa dhufu hunda haraameesuu yokkaanis laguu ta’uu isaa waliif himee diduun haqaa ta’uu hubatuu qaba. Sababn isaas diinni innikkaa amma dura waan fira ta’ee hin mul’aneef, diinni innikaa yoomiyyuu diinuma.
Previous: Ibsa hubannoof: Kun lola Oromoo fi Oromiyaa dadhabsiisuuf godhamu
Next: Hirphaa Disaasaa: nama jireenyaa isaa guutuu Oromoof hidhamaa jiru